SULSULE :: News Portal
रानीपोखरीलाइ रमिता नबनाऔं
पुरातात्विक संस्था भनेका यो देशलाइ चिनाउने धरोहर हुन । तिनीअहरु आफै अमर हुदैनन । कतिपय विपदमा तिनको आकार प्रकार विग्रन सक्त छ किन भने ती कुनै समयमा मानव द्वारा नै निर्मित थिए । यदि विग्रिए भने फेरी यसबोलामका मान्छेलेनै बनाउने हो तर यही शर्त हुन्छ तिनको पुरातात्विक परिचय नविगानैृ । यही सनदर्भमा आउकोछ रानीपोखरी पुनर्निर्माणकाम२०७२ को भूकमपले विगारेको यसको स्वरुप कस्तोहुनेभन्ने अहिले विवाद देखियो । केही पहिले सुझाव दिन बनाइएको विज्ञ समितिले काठमाडौं महानगरपापलिकाका मेयरलाई प्रतिवेदन बुझायो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी पुस १३ मा बनेको समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन भने बुझाउन सकेन । प्रतिवेदन नै विमतिमा परेपछि त्यसपछिको पुन निर्माण कस्तोहोला भन्ने अनुमान गर्नसकिन्छ ।
प्रदेशसभाको ऐतिहासिक शपथ
नयाँ संविधान अनुसारका जननिर्वाचित नयाँ सदस्यहरले हिजोदेखि विधिवत काम थालेका छन । अवको प्रतिष भनेको परिवर्तित अवस्थामा यी नयाँ प्रतिनिधिहरले समाजमा कस्तो सन्देश दिनेछन भन्ने प्रतिक्षा को विषय भएकोछ । प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको हिजो एकै पटक देशैभरी शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सम्पनन भयो । सातवटै प्रदेशका सदस्यलाई यस दिन पद तथा गोपनीयतको शपथ गराइएको हो । यो दिनदेखि संघीय संसद बाहेक दुइ तहका सरकारले काम थाल्ने अवस्था आयो । स्थानीय तहको यस अघिनै कार्य प्रारम्भ भै नै सकेकोछ । तर ती तहले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेको यो बेला सम्म पाइएन । अव त्यस्तो नहोस भन्ने आम चाहना प्रकट हुनु स्वाभाविक नैहो । प्रदेश नै अव त्यो क्षेत्रको प्रमुख कार्यकारी निकाय हो । केन्द्रले समन्वय गर्नु बाहेक अरुकाम बाकी रहेको छैन ।
कर तिर्न कञ्जुुस्याइँ किन ?
राष्ट्रनिर्माणको लागि कर तिर्नुुपर्ने दायित्व सबैको हो । कर तिर्नुु सचेत जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पनि हो । यो कर्तव्यबाट कुनै पनि कुुनै नागरिक, व्यवसायी प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरु वञ्चित हुुनुहुँुदैन । तर विडम्बना विकासोन्मुुख राष्ट्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार र करछली हो । यो समस्याबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सकेको छैन ।
नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रमा गएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय निकाय गठन भएका छन् । राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीरुले यसै साता एउटा सार्वजनिक समारोहमा.......
रेमिट्यान्सको सहीरुपमा सदुुपयोग होस्
नेपालमा वार्षिकरुपमा औसत दुुई खर्ब ५९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । तर विडम्बना यसको ९० प्रतिशत रकम उपभोगमा नै खर्च हुुने गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालीले ......
घर धितोमा ऋण कार्यान्वयन होस्
वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पपछि धेरै मानिसहरु घरविहीन हुनपुगे । ठूलो परिमाणमा आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षति भयो । सोहीपश्चात् सरकारले भूकम्पपीडितहरुको............
सभामुखको भ्रमण कति सान्दर्भिक ?
संंसद्सामु धेरै चुनौती छन् । गएको हप्ता दर्ता भएका राष्ट्रिय सभा गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेनन् भने संविधान कार्यान्वयनमा एउटा ठूलो अवरोध आउनेछ । यता संसद्को आयु झन्डै एक..........
२ नम्बर प्रदेशले विवेक प्रयोग गर्ने दिन
तेस्रो चरणको निर्वाचन आज सम्पन्न हुदैँ छ  । यो प्रदेशको निर्वाचन यसकारण पनि सबैको प्रतिक्षाको विषय बन्यो जो विकृतिका रास नै लागे । यस्ता उम्मेदवारलाई पराजित गर्न .......
तारहरुको सञ्जालमा सहर
वास्तवमै देशैभरिका सहर तारको सञ्जालमा छन् । कतै लडिरहेका, कतै जोडिरहेका र कतै मान्छेको ज्यान नै लिने गरी । यही गञ्जागोलबीच सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सडकको एउटा पोलमा ....
पुँजी बजारको सिण्डिकेट तोड
गत हप्ता आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कर कार्यालले तीनवटा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न पत्राचार गरे । लामो समयसम्म भ्याट नतिरेका ब्रोकर.........